रुकुम घटना: ‘छानविनपूर्व नै सुष्माको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’ – Karnalisandesh
रुकुम घटना: ‘छानविनपूर्व नै सुष्माको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’
प्रकाशित मितिः २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार २२:३६ July 5, 2020
काठमाडौँ। जेठ १० गते रुकुमको सोतीमा भएको सामूहिक युवा नरसंहारकी प्रमुख पात्रका रुपमा चित्रण गरिएकी यूवतीको बाँकी जीवनको बारेमा नायिका रेखा थापाले आवाज उठाएकी छन्।
नायिका थापाले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत घटनाका दोषीलाई कानूनी कारबाहीको माग गर्दै उक्त घटनामा जोडिएकी ति युवतीको सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने काम भएकोमा आपत्ति पर्कट गरेकी छन्।
ती युवतीको गोपनीयता भंगगर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र नारी अस्मिताको धज्जी उडाउने काम भएको बताउँदै उनले लेखेकी छन्, ‘रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई अबिलम्ब न्याय दिइयोस्। यस घटनामा जोडिएकी सुष्मा मल्लका बारेमा जसरी चरित्र हत्या गर्ने खालका र नारी अस्मिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ। त्यस्ले फेरि पनी उत्पीडित वर्गमाथि प्रहार भयो भन्ने लाग्छ।’
नायिका थापाले जातीय जडताका बीचमा पनि मल्लकी छोरीले दलितसँग प्रेमगर्नु साहसिक काम भएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘एउटा दलितसँग प्रेमगर्ने सहास भएकी बालिकाको चरित्र हत्या गरेर न्याय हुन्छ? दोषीलाई कानूनी कार्वाही हुनु पहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सामाजिक र चारित्रिक सम्पत्ती बजारमा लीलाम गर्नु पर्ने? नेपालमा केटी मान्छेको बेइज्यत गरेर न्याय पाउने हो र? छानबिनको क्रममा रहेकी किशोरिको बारेमा अनर्गल कुरा लेख्ने छुट छ ? समुहमा बाहुन छेत्री, जनजाती जो जस्लाई गाली गर्नुछ गरे हुन्छ ? एउटा केटी मान्छेको पेटिकोट समातेर बिद्रोह हुन्छ? दोषी वा निर्दोषको किटान हुनु पहिले नै यसरी मानसिक हिँसा र प्रताडना दिएको कारण ति किशोरी नदिमा हाम्फलेमा कस्ले जवाफ दिन्छ?’
छानविन प्रतिवेदन नआउँदै ति युवतीको चरित्र हत्या गरिएको भन्दै नायिका थापाले विरोध जनाएकी छन्। उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘दलितलाई प्रेम गरेको सट्टा जसरी उस्को चरित्र हत्या हुँदैछ। यसले जातिबादी सोचलाई झन् धेरै बालवालिकामा स्थापित गर्ने देखिन्छ। राज्यसँग लड्नु पर्‍यो। एउटा १७ वर्ष कि किशोरिलाई मानसिक र सामाजिक उत्पिडन किन ? दोषि भए कानूनी कारबाही गरियोस्। यो नबिर्सौ कि एउटा किशोरीको जीवन बर्वाद पारेर न्याय पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोलि कसैलाई माया गर्ने छैनन्।’
उक्त घटनामा ६ जना युवाहरुको ज्यान गएको थियो। मृतक प्रेमीसँग जोडेर ति युवतीको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा नानाथरी टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।